शेयर शिक्षा - Share Gyan
रिपो तथा रिभर्स रिपो भनेको के हो ? यसको उपयोग के का लागि गरिन्छ? रिपो तथा रिभर्स रिपो केन्द्रीय बैंकले छोटो समयावधीका लागि बैंकिंग प्रणालीमा तरलता प्रबाह गर्न तथा बैंकिंग प्रणालीमा रहेको...	Read more »
के हो अक्सन शेयर ? अक्सन शेयर (Auction Share) लाई नेपालिमा शेयर लिलामी भनिन्छ। लिलामीमा कुनै पनि सामान खरिदकर्ताहरुले बोलकबोल गरेर जसले धेरै मुल्य तिर्छ उसैले सो सामान पाउने हुन्छ। साधारणतय हामीले...	Read more »
2.1 AGM – Annual General Meeting एक आर्थिक वर्षभित्र कम्पनीले गरेको काम कारबाही, उपलब्धि र समस्य, भावी योजना, बार्षिक हिसाबकिताब पारित, शेयरधनिहरुलाई दिने लाभांशको बारेमा छलफल , र अन्य महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल...	Read more »
शेयर बजारमा बुझ्नु पर्ने ५० वटा आधारभूत कुराहरु
1.1 Bull/Bullish & Bear/Bearish शेयर बजारको मूल्य घट्यो भने बियर मार्केट वा बियारिश मार्केट भनिन्छ र बढ्यो भने बुल मार्केट अथवा बुलिश मार्केट भनिन्छ। यसरि शेयरको मूल्य घट्ने र बढ्ने भएकोले शेयर...	Read more »